Sida loo beddelo Sawirrada Tooska ah ee sawirka muhiimka ah lagu soo bandhigo Sawirada IOS | Wararka IPhone
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee Apple ay ku dari karto sawirrada iPhone-keena ayaa ahaa inay awood u yeelato inay nolol u keento mahadnaq yar yar oo laga duubay sawirrada aan qaadanno. Tani waxay timid mahadsanid Sawirro Toos ah. Waa run in moodeellada oo dhami aysan iswaafaqi karin, laakiin shaqadan Waxay ku habboon tahay qaabka iPhone 6S wixii ka dambeeyay.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad aragtay markii aad rabto inaad fiiriso maktabaddaada arjiga "Sawirada", kaliya hal sawir oo dhammaan kuwa lagu soo ururiyey isku xigxiga duubista ayaa la soo bandhigayaa. Sawirkan Waxaa loo yaqaan "Fure Muhiim ah". Hadana haddii aad u maleyneyso in badankood aysan soo bandhigin qeybta ugu fiican Sawirka Tooska ah ee aad qabatay, waxaan kula socodsiineynaa inaad beddeli karto sawirkaas lagu muujiyay, asal ahaan, maktabadda sawirka. Marka fiiro gaar ah u yeelo oo si dhakhso leh isbeddelada u samee.
Si aad u hesho sawirada leh Saamaynta Sawirka Tooska ah, waa inaad gashaa codsiyadaaga Sawirrada Sawirada oo aad ka eegtaa "Albamyada". Markaad gudaha gasho waxaad arki doontaa inay jiraan fayllo kaladuwan oo kulmiya dhammaan sawirrada leh "sawirro", "sawirro", "waqti-lumis", iyo wixii la mid ah. Y mid ka mid ah galka ayaa ururiya dhammaan "Sawirrada Tooska ah" ee aad qaadatay. Waa hagaag markaa, gal.
Dalxiis ku soo qaad dhammaan qabsashada aad ku hayso galka oo xulo sawir; midka aad u maleyneyso in thumbnail-ka ka muuqda maktabadda sawirka uusan metelin midka ugu fiican sawirkan. Markaad gudaha gasho, taas waad arki doontaa dhinaca midig ee sare waxaad fursad u leedahay inaad "Tafatirto". Hore u soco.
Dhammaan xulashooyinka tafatirka ee sawirkan ayaa markaa ka soo muuqan doona shaashadaha. Midkoodna waa kan hoose ee sawirka - sida loo malaynayo inuu yahay sawirka muhiimka ah ee ay doorteen macruufka - carousel ayaa la muuqda dhammaan tallaalada ka kooban Sawirka Tooska ah ee su'aasha laga qabo. In la ogaado waa maxay sawirka muhiimka ah ee xilligan, dushiisa - had iyo jeer ka hadlaya daaqada - dhibic yar oo cad ayaa soo muuqan doonta markii aad go'aansato inaad ku dhex wareegto carousel.
Si aad u bedesho sawirkan muhiimka ah, farta ku dhaq dhaqaaqa carousel, dooro kan ugu fiican sawirka sharraxaya xilligan; Xagga kore waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka ah "Samee sawir muhiim ah", calaamadee oo ku dhufo "Ok" ee calaamadda hoose. Iyo voila, sawirka muhiimka ah waa la beddeli doonaa. Maxaad u maleyneysaa inaad ku laabaneyso sawirka asalka ah ee furaha? Barta asalka ah ee midabka cad wali wuu ku sii jirayaa walow aan si mugdi ku jirin.
Faahfaahin dheeraad ah: Apple
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo beddelo Sawirro Live ah sawir muhiim ah oo lagu soo bandhigo Sawirrada iOS
Apple wuxuu barnaamijka 'TV' ka bilaabay Mexico